China Wooden Umbala Sandstone Splitface Stone Panel mveliso kunye nabenzi | I-DFL
Umzekelo No .:I-DFL-I-1805SPB
Ubukhulu: 60 × 15 cm.
Isixhobo: yelitye lentlabathi
I-RFQ yesalathiso sabathengi
Umbala weplanga weSandstone Ilitye lokwahlulahlulaIphaneli inobutyebi bobume bokubhala kunye nombala obongeza ubungakanani bokuphamba okungapheliyo kuyo nayiphi na indawo yangaphakathi okanye yangaphandle. Ukuqinisekisa ukomelela kunye nokusebenza ngokuchaseneyo, iimveliso zamatye endalo zinokusetyenziselwa ukwenza ukujonga okuhlangeneyo kwesitayile esihlala sikho. DFLstoneIiphaneli zamatye zihambelane nezi mpawu zilandelayo:
Iikhathalo zomsebenzi Sinokhetho olubanzi kumaxabiso amahle ukukunceda ufumane ubuchule bokuyila. Onke amatye aMatye aQhekekileyo oMthi aqinisekisiwe kumgangatho. Siyi-China Imvelaphi yefektri yeplanga yelitye Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Popular Gold Natural Line Quarzite Stone Wall P ...
Ukucocwa okumthubi kweLitye leNdalo ngamatye eMveli
Iinkqubo eziLungileyo zeTye eziDibeneyo zeNdawo yokuPhuma ...
Ixabiso lenkqubo yokwenziwa kwamatye okwenyani ngamaxabiso angaphandle